Suuqii Qoryooley oo xalay basbeelay (Yaa lagu eedeeyey?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Suuqii Qoryooley oo xalay basbeelay (Yaa lagu eedeeyey?)
24th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Suuqii degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gabi ahaantiis xalay gubtay, iyadoo guddoomiyaha degmadaas oo ka hadlay dabkan inuu yahay mid ay ka dambeyso Xarakada Al-shabaab.
Dabkan ayaa la sheegay inuu billowday xalay 11:30 habeenimo ee xalay uuna socday illaa 3:10 gellinkii dambe ee xalay, markaasoo lagu guuleystay in la damiyo dabka xooggiisa, balse weli waxaa qiiqaya qaybo ka mid ah suuqaas, iyadoo dabkan uu gubay dhammaan qaybihii uu ka koobnaa suuqaas.
Wararku waxay sheegayaan in dabkan ayaa dhulka la simay qeybihii ugu muhiimsanaa Suuqaasi sida bacadlaha, kawaanka iyo bakhaaro lagu iibinayey badeecado kala duwan.
Gudoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, Cismaan Xaaji Maxamed ayaaa sheegayin guud ahaan suuqaasi uu gubtay, aysana jirin wax hanta ah oo badbaaday, isagoo xusay in la waayey gurmad dabkaasi looga hortago sida Booyado biyo soo dhaamiya iyo dab demisyo.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in dabka uu ka billowday qaybaha lagu iibiyo dharka uuna ku baahay dhammaan qaybaha kale ee suuqaas uu ka kooban yahay, hanti badanna ay halkaas ku gubatay.
“Al-shabaab markii uu dabku billowday ayay gudaha magaalada xabbad ka billaabeen, si ay dadka uga horjoogsadaan inay dabka dambiyaan, laakiinse kuma aysan guuleysan oo ciidamada dowladda ayaa ka hortagay,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Waxaa uu sheegay inaan illaa hadda la ogeyn tirada hantida ku gubatay Suuqaasi oo isugu jiray lacago cadaan ah iyo badeecado aad u fara badan, wuxuuna xusay in ganacsatada degmadaas uu soo gaaray khasaare lixaad leh.
Al-shabaab kama jawaabin eedeynta ku saabsan iney ka dambeeyeen gubashada Suuqii degmada Qoryooley, hase ahaatee degmadaas ayaa ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyey ee ay la wareegaan ciidamada dowlada iyo AMISOM.
Soomaali ku nool Mareykanka oo iska qabtay nin kala tegi rabay carruur
Meydka Saado Cali Warsame oo lagu aasay Muqdisho